७८ हजार तलबमा साउदीमा वैदेशिक रोजगारीको सुनौलो अवसर ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
७८ हजार तलबमा साउदीमा वैदेशिक रोजगारीको सुनौलो अवसर !
अन्य सुविधाहरू बिदा: ३० दिनको वार्षिक बिदा।फिर्ता टिकट:2वर्ष। दैनिक कार्य घण्टा: 8 घण्टा साप्ताहिक कार्य दिन:6दिन आवश्यकताहरु
न्यूनतम योग्यता: ०
कार्य अनुभव: पद अनुसार – आधारभूत कम्प्युटर सीपहरू – अंग्रेजीमा राम्रो कम्युनिकेटर – एक सकारात्मक, स्मार्ट टोली सदस्य – निर्देशनहरू सही रूपमा पालना गर्न सक्षम – मिलनसार
सावधानी तपाईंले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको LT विवरण जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ वैदेशिक रोजगारीको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने, निम्न निर्देशनहरू महत्त्वपूर्ण छन्:
– आवेदन गर्नु अघि सधैं LT विवरण जाँच गर्नुहोस् – आवेदन गर्नु अघि बाँकी कोटा बारे जान्नुहोस्। कोटा सकियो होला । – भर्ती एजेन्सी र विदेशी रोजगारदाता को स्थिति र लेनदेन इतिहास बारे जान्नुहोस्। तपाईले यसलाई खोज्नको लागि गुगल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। – यो जानकारी ‘बैदेशिक रोजगार’ बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ
यस कागजातमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी नगद नदिनुहोस्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि, तपाईंले काम गरिरहनुभएको देश, तपाईंले काम गरिरहनुभएको कम्पनी र तपाईंलाई उपलब्ध गराइने सुविधाहरूबारे राम्ररी पढ्नुहोस्। यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर मात्र नियम र सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्।
कृपया त्यसको एक प्रति सुरक्षित रूपमा साथमा राख्नुहोस्। विदेशमा यात्रा गर्दा नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोस् किनकि तपाईलाई धोका हुने सम्भावना छ। यदि तपाईंलाई यस विज्ञापनको बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ भने, कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, तहचलमा सम्पर्क गर्नुहोस्।